Beesha caalamka oo ka hadashay doorashada Somaliland - BBC News Somali
Image caption Dad saf ugu jira in ay helaan kaarka codeynta ee Somaliland
Wafdi sare oo ka socday dalal caalami ah ayaa booqday Hargeysa, kuwaas oo soo eegayay sida ay u socoto qabanqaabada doorashada bisha soo socoto ee Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida u dhowaaqday ee Somaliland.
Warsaxaafadeed ay soo saareen ayaa lagu xusay in Hargeysa ay booqdeen safiirada Denmark, Midowga Yurub, iyo ergo ka socotay Finland, Fransiiska, Netherlands iyo UK.
Wafdiga ayaa la kulmay madaxwayne Siilaanyo, guddiga doorashada ee NEC iyo seddax musharrax oo xilka madaxweynaha u tartamaya.
Waxay sheegeen in ay si cad u taageerayaan doorasho xaq ah in ay Somaliland ka dhacdo 13-ka bisha soo socota ee Nofembar.
Waxay sidoo kale musharrixiinta ku booriyeen in ay aqbalaan natiijada kastoo ka soo baxda doorashada.
"Daneeyayaasha caalamiga ah waxay ogaadeen in diyaargarowga doorashada ee guddiga NEC uu ahaa mid miro dhal leh", ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen ergada booqatay Hargeysa.
"Soo afjaridda diiwaan gelinta codbixiyayaasha iyo siinta kaararkii ay ku codeyn lahaayeen iyo qaabilidda musharrixiinta xilka madaxweyne iyo ku xigeen, waxay ahayd guul wayn oo la gaaray," ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Qaybina Kaadhadhka codbixinta Somaliland oo ka bilaabantay Sool, Sanaag
Mowqifka Somaliland ee ku aadan qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya
Ayadoo shan isbuuc ay ka harsan tahay doorashada "ergada waxay u sheegayaan axsaabta siyaasadda, guddiga doorashada, iyo ururada bulshada rayidka ah in ay sii wadaan ka wada shaqeynta doorasho nabad, cadaalad iyo mid loo dhan yahay ah".
"Doorka ururada bulshada rayidka ah iyo warbaahinta waa wacyigelinta codbixiyaha si uu u helo xoriyad uu wax ku doorto, isaga oo si dhaw u qiimaynaya siyaasadaha musharixiinta u tartamaya doorashada madaxwaynaha iyo iyaga oo kula xisaabtamaya xisbiyada siyaasada iyo dhamaan hay'ada Somaliland in ay fuliyaan balanqaadyadii ay u sameeyeen bulshada," ayaa lagu yiri qoraalka.
"Gaar ahaan, korjoogtada ay ansixiyeen gudduga NEC, waxay gacan ka geysan karaan xoojinta kalsoonida iyo daacadnimada hanaanka ay wax ku socdaan".
Ururada bulshada rayidka ah ayaa la sheegay in ay diyaarin doonaan 620 qof oo doorashada la socda, kuwaasoo la shaqeyn doons 60 kormeerayaal oo madaxbannaan iyo khubaro.
Doorashada madaxtinnimada Somaliland oo dib loo dhigay
Haddii doorasho Somaliland ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah oo aan madmadow lahayn, ayna wada aqbalaan dhamaan xisbiyada "waxay muujineysaa qaangaarnimada nidaamka dimuquraadiyadda ee Somaliland", sida ku qoray warsaxaafadeedka.
Doorashada deegaanada iyo midda baarlamaanka ayaa la qaban doonaa ka mid marka ay dhammaato midda madaxweynaha.
Dowladaha caalamiga ah ee Somaliland daneeya, ayaa sheegay in ay sii wadayaan taageerada, si dhowna ula soconayaan diyaargarowga iyo qabashada doorashada madaxweynaha.
Muuqaal Kharashka guurka Somaliland ayaa mararka qaar gaara ilaa iyo $15,000.
Wararkii ugu waaweynaa ee ay BBC-du tebisay lixdankii sano ee la soo dhaafay
Maqal Xisbiga mucaaradka Wadani oo shir uu uga furmay Hargeysa